၁၉၈၀ ကနေ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း မွေးဖွားကြသူတွေဖြစ်တဲ့ Y generation လို့ခေါ်တဲ့ လူငယ်မျိုးဆက် သစ်တွေက သူတို့ရှေ့မျိုးဆက်က လူတွေနဲ့ စိတ်ဓါတ်အတွေးအခေါ် လုပ်ပုံကိုင်ပုံတွေ ခံယူချက်တွေ မတူပါဘူး။ ဒါကြောင့် ယနေ့ ၂၁ ရာစုခေတ်မှာ ဆိုရင် Y generation လူငယ်မျိုးဆက်တွေက ရှေ့မျိုးဆက်တွေနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်တွေ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ Y generation မျိုးဆက်တွေက social media တွေပေါ်မှာ အချိန်ကုန်တာ ပိုများပါတယ်။ အင်တာနက်ကို ပိုမိုသုံးစွဲလာကြပါတယ်။ ဒီကနေစပြီး အမြင်တွေမတူတာတွေဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီအခါမှာ လုပ်ငန်းခွင်မှာဆိုရင်လည်း အပျင်းထူသူတွေ အလုပ်မကြိုးစားသူတွေအဖြစ် အထင်ခံရတတ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်အဲ့လို အထင်ခံရတာလည်းဆိုတော့..
၁. ကိုယ်ယုံကြည်တဲ့ဘဝကို ကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်ချင်သူများ
အချိန်တိုင်းအလုပ်ပဲလုပ်နေရမယ် မနားမနေကြိုးစားမှ အရမ်းကို ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မယ်ဆိုတာမျိုးကို သူတို့ လက်မခံပါဘူး။ ကိုယ်ဝါသနာပါတာ၊ ကိုယ်ပျော်မွေ့ရာကို အချိန်ပေးရင်း အလုပ်လည်းလုပ်နေရတာမျိုးကို ကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်။ ရှေးမျိုးဆက်လူကြီးတွေကတော့ ဘာမှမလုပ်ပဲ ထိုင်နေတာမျိုးကို သူတို့သဘောမကျပါဘူး အချိန်တွေကို ဖြုန်းတီးတယ်လို့ ထင်တဲ့အတွက် ဒီအခါမှာ ကတောက်ကဆလေးတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
Recommended for you - သင့်မှာဒါတွေရှိလား
၂. အစဉ်အလာဆိုတာကို သိပ်ပြီးလက်မခံချင်သူများ
အရင်ခေတ်က အလုပ်ရဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို မုန်းသူတွေပါ။ အချိန်ကုန်ပြီး အကျိုးမရှိတဲ့ အစည်းအဝေးတွေ၊ ငါးမိနစ် ဆယ်မိနစ်လောက်နောက်ကျတာကို ဒဏ်ကြေးတပ်တဲ့ အလုပ်ရဲ့ စည်းကမ်းတွေကို မုန်းတတ်တဲ့သူတွေပါ။ သမာရိုးကျအတိုင်း လုပ်နေတာထက် အလွယ်ဆုံးနဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှု အရှိဆုံးနည်းလမ်းကို မြင်တတ်သူတွေဖြစ်လို့ သူတို့ကို အပျင်းထူသူတွေ အဖြစ် ဝေဖန်တတ်ကြပါတယ်။
၃. အသေးစိတ်လုပ်ရမယ့် အလုပ်တွေကို စိတ်မဝင်စားတတ်သူများ
Recommended for you - ဘဝကို ရှေ့ဆက်သွားနိုင်ဖို့ စွန့်လွှတ်ရမယ့် အရာတွေ
၄. လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ပြီး အလိုက်သင့်လုပ်ချင်တတ်သူများ
မနက် ကိုးနာရီကနေ ညနေ ငါးနာရီအထိ လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ စည်းကမ်းမျိုးတွေကို သူတို့မကြိုက် တတ်ကြပါဘူး။ အရေးကြီးတဲ့ အလုပ်ရှိတဲ့ အခါ ညမအိပ်ဘဲ လုပ်မယ်လို့ တွေးထားတတ်ကြပြီး အလုပ်လုပ်စရာ တိတိကျကျမရှိဘဲ မနက် ရုံးချိန်အတိအကျ လာရမယ်ဆိုတာမျိုးကို မုန်းတတ်ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ အခြေအနေနဲ့ လိုက်လျောညီထွေနေတတ်သူတွေပါ။
၁၉၈၀ ကနေ ၂၀၀၀ ပွညျ့နှဈအတှငျး မှေးဖှားကွသူတှဖွေဈတဲ့ Y generation လို့ချေါတဲ့ လူငယျမြိုးဆကျ သဈတှကေ သူတို့ရှမြေို့းဆကျက လူတှနေဲ့ စိတျဓါတျအတှေးအချေါ လုပျပုံကိုငျပုံတှေ ခံယူခကျြတှေ မတူပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ ယနေ့ ၂၁ ရာစုခတျေမှာ ဆိုရငျ Y generation လူငယျမြိုးဆကျတှကေ ရှမြေို့းဆကျတှနေဲ့ ဆနျ့ကငျြဘကျတှေ ဖွဈနတေတျပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့ Y generation မြိုးဆကျတှကေ social media တှပေျေါမှာ အခြိနျကုနျတာ ပိုမြားပါတယျ။ အငျတာနကျကို ပိုမိုသုံးစှဲလာကွပါတယျ။ ဒီကနစေပွီး အမွငျတှမေတူတာတှဖွေဈလာပါတယျ။ ဒီအခါမှာ လုပျငနျးခှငျမှာဆိုရငျလညျး အပငျြးထူသူတှေ အလုပျမကွိုးစားသူတှအေဖွဈ အထငျခံရတတျပါတယျ။ ဘာကွောငျ့အဲ့လို အထငျခံရတာလညျးဆိုတော့..
၁. ကိုယျယုံကွညျတဲ့ဘဝကို ကိုယျတိုငျတညျဆောကျခငျြသူမြား
အခြိနျတိုငျးအလုပျပဲလုပျနရေမယျ မနားမနကွေိုးစားမှ အရမျးကို ကောငျးမှနျတဲ့ဘဝတဈခုကို ပိုငျဆိုငျနိုငျမယျဆိုတာမြိုးကို သူတို့ လကျမခံပါဘူး။ ကိုယျဝါသနာပါတာ၊ ကိုယျပြျောမှရေ့ာကို အခြိနျပေးရငျး အလုပျလညျးလုပျနရေတာမြိုးကို ကွိုကျနှဈသကျပါတယျ။ ရှေးမြိုးဆကျလူကွီးတှကေတော့ ဘာမှမလုပျပဲ ထိုငျနတောမြိုးကို သူတို့သဘောမကပြါဘူး အခြိနျတှကေို ဖွုနျးတီးတယျလို့ ထငျတဲ့အတှကျ ဒီအခါမှာ ကတောကျကဆလေးတှေ ဖွဈလာတတျပါတယျ။
Recommended for you - သငျ့မှာဒါတှရှေိလား
၂. အစဉျအလာဆိုတာကို သိပျပွီးလကျမခံခငျြသူမြား
အရငျခတျေက အလုပျရဲ့စညျးမဉျြးစညျးကမျးတှကေို မုနျးသူတှပေါ။ အခြိနျကုနျပွီး အကြိုးမရှိတဲ့ အစညျးအဝေးတှေ၊ ငါးမိနဈ ဆယျမိနဈလောကျနောကျကတြာကို ဒဏျကွေးတပျတဲ့ အလုပျရဲ့ စညျးကမျးတှကေို မုနျးတတျတဲ့သူတှပေါ။ သမာရိုးကအြတိုငျး လုပျနတောထကျ အလှယျဆုံးနဲ့ အကြိုးသကျရောကျမှု အရှိဆုံးနညျးလမျးကို မွငျတတျသူတှဖွေဈလို့ သူတို့ကို အပငျြးထူသူတှေ အဖွဈ ဝဖေနျတတျကွပါတယျ။
၃. အသေးစိတျလုပျရမယျ့ အလုပျတှကေို စိတျမဝငျစားတတျသူမြား
Y Generation လို့ချေါတဲ့ မြိုးဆကျသဈတှဟော နညျးပညာခတျေနဲ့ သတငျးအခကျြအလကျခတျေမှာ မှေးဖှားလာသူတှပေါ။ ဒါကွောငျ့ နညျးပညာနဲ့ အငျတာနကျကို အားကိုးပွီး အသုံးခတြတျကွပါတယျ။ စာရငျးစာအုပျကွီးထဲက စာရငျးတှကေို ဘောပငျနဲ့ အသေးစိတျ တှကျနရေတဲ့ အလုပျမြိုးကို သူတို့ လှညျ့မကွညျ့တတျကွပါဘူး။
Recommended for you - ဘဝကို ရှဆေ့ကျသှားနိုငျဖို့ စှနျ့လှတျရမယျ့ အရာတှေ
၄. လိုကျလြောညီထှဖွေဈပွီး အလိုကျသငျ့လုပျခငျြတတျသူမြား
မနကျ ကိုးနာရီကနေ ညနေ ငါးနာရီအထိ လုပျရမယျဆိုတဲ့ စညျးကမျးမြိုးတှကေို သူတို့မကွိုကျ တတျကွပါဘူး။ အရေးကွီးတဲ့ အလုပျရှိတဲ့ အခါ ညမအိပျဘဲ လုပျမယျလို့ တှေးထားတတျကွပွီး အလုပျလုပျစရာ တိတိကကြမြရှိဘဲ မနကျ ရုံးခြိနျအတိအကြ လာရမယျဆိုတာမြိုးကို မုနျးတတျကွသူတှဖွေဈပါတယျ။ သူတို့ဟာ အခွအေနနေဲ့ လိုကျလြောညီထှနေတေတျသူတှပေါ။
Read 6202 times Last modified on Tuesday, 17 October 2017 10:33
သင်္ချာဘာသာရပ်မှာ ပိုတော်လာအောင် ဘယ်လို လေ့လာသင့်လဲ
ဥာဏ်ရည်မြင့်မားတဲ့ သူတွေမှာ တွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ အခက်အခဲများ